I-EMISOFT Decrypter ithuluzi lokuthola amafayela abhalwe ngekhodi ngu-LooCipher | Kusuka kuLinux
Ukuhlola inetha ngithole okuhle kakhulu application ukuthi ngokombono wami kufanele ukwabiwa, ngoba yize kungeyona iLinux noma okuthile ngakho. Lolu hlelo lokusebenza lungenye yalezo okufanele zinakwe.
Ukuhlaselwa kweRhlengware kanye nokuhlukahluka kwawo sekuya kwanda kakhulu futhi zinemiphumela emibi ezinkampanini zabo bonke osayizi. Umthelela wangempela wezezimali wobulelesi obujwayelekile, kanye ne -hlengware ikakhulukazi, kunzima ukuwuhlola.
1 Mayelana noLooCipher
2 EMISOFT Decrypter ithuluzi lalobu bubi
3 Isetshenziswa kanjani ?
I-LooCipher ingenye yalezo zinhlawulo. Kutholwe ngumcwaningi wezokuphepha, isetshenziselwa ukuthelela abasebenzisi. Isoftware isatshalaliswa ngomkhankaso wogaxekile ofihliwe njengefayela le-.docm elibizwa nge-Info_BSV_2019.docm.
I-LooCipher ifakwa ngemibhalo enezwi eyi-Word elanda okungasetshenziswa nokuyiqhuba. Uma isenziwe, i -hlengware izobethela idatha yesisulu futhi izokwengeza isandiso se-.lcphr kumagama wamafayela abetheliwe.
Isihlengo lapho-ke kuzokhombisa isikrini sokuqaqwa kwemfihlo se-LooCipher esiqukethe ukubalwa phansi kuze kucatshangwe ukuthi ukhiye wakho uzosuswa.
Ngokuyinhloko njenganoma iyiphi i -hlengware yesimanje isisulu sicelwa ukuthi sikhokhe kumaBitcoins bese sisebenzisa uhlelo olufanayo okwenziwe ngalo konke ukubhala ngamafayela awo lapho ukukhokha sekuqedile.
Lokhu kunikeza isisulu inkinobho yokuqinisekisa ukuthi ngabe inkokhelo yenziwe yini.
Leli sayithi lokukhokha likunethiwekhi yeTor futhi ungakhokha kuphela kumaBitcoins. Yize lokhu kutheleleka kunokufana okuningi kwe-CryptoLocker noma i-CryptorBit, abukho ubufakazi bokuthi buhlobene.
Ukuthenga i-decryptor yamafayela, kufanele kukhokhwe isihlengo se- $ 500 USD kumaBitcoins. Uma ungakhokhi isihlengo ezinsukwini ezine, kuzophindeka kabili kuye ku- $ 4 USD. Baphinde bathi uma ungathengi i-decryptor kungakapheli nenyanga, bazosusa ukhiye wakho oyimfihlo futhi ngeke usakwazi ukubhala ngemfihlo amafayela akho.
EMISOFT Decrypter ithuluzi lalobu bubi
Ukuze uxhase abantu ababambe iqhaza kule nkinga, U-Emsisoft usanda kumemezela kuleli sonto ukukhishwa kwe-decryptor ye-LooCipher eyenziwe nguMichael Gillespie ngosizo lukaFrancesco Muroni evumela ukuthi izisulu zibhale phansi amafayela wazo mahhala.
Ngaphambi kokusebenzisa ithuluzi, Kunconywa ukuthi uqiniseke ukuthi usususile uhlelo olungayilungele ikhompyutha kwikhompyutha yakho, ongakwenza ngenguqulo yamahhala ye-Emsisoft Anti-Malware. Kufanele futhi uqiniseke ukuthi awuyisusi inothi lesihlengo ("!!! READ_IT !!!. Txt") noma i-decryptor ngeke isebenze.
Kanye ukulandwa, vele usebenzise uhlelo ngamalungelo okuphatha ukubhala ngemfihlo wonke amafayela ahloselwe i -hlengwareware.
Uma iqala, kufanele bamukele imibandela yesivumelwano selayisense futhi bazoba esikrinini seBruteforcer.
Lapha i-decryptor idinga ukuxhumeka kwe-inthanethi nokufinyelela kumafayili ambalwa equkethe ifayela elibetheliwe nenguqulo yoqobo engabhalwanga yefayela elibethelwe ukwakha kabusha okhiye bokubethela okudingekayo ukuze kususwe ukubethela yonke idatha yakho.
Kunconywa ukuthi amagama wamafayela wamafayela woqobo futhi abethelwe angashintshwa, njengoba i-decryptor ingenza ukuqhathanisa kwegama lefayela ukunquma isandiso sefayela esifanele esisetshenziselwa amafayela abethelwe.
Lapho ukhiye utholakala, kuzoboniswa umyalezo ositshela ukuthi ukhiye utholakele.
Lapha kuzofanele bachofoze ku-Yamukela kuphela ukuqhubeka.
Ngemuva kokuchofoza KULUNGILE kulo mlayezo ongenhla, ithuluzi lizoqala kabusha ngokhiye osuvele ulayishiwe. Chofoza inkinobho yokwengeza ifolda ukufaka amafolda aqukethe amafayela abetheliwe:
Uma seziqedile, chofoza inkinobho yokuChofoza ukuqala inqubo yokuqaqwa kwefayela. Kuleli qophelo, ithuluzi lizosesha amafayela ane-extension '.lcphr' ezindaweni ezichazwe ngenhla futhi lisuse ngokuzenzakalela ukubethela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » I-EMISOFT Decrypter ithuluzi lokuthola amafayela abhalwe ngekhodi ngu-LooCipher
Ukuphepha Kwemininingwane: Umlando, Amatemu kanye Nensimu Yesenzo